December | 2015 | linyeikhtin
ကျောင်းပုရဝုဏ်ထဲခြေချမိတော့ ငယ်စဉ်အချိန်တွေဆီ စိတ်ပြန်ရောက်မိသလိုပင်။
ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၊ ကျောင်သားရေးရာ၊ စာသင်ဆောင် အရာအားလုံးက ဟိုစဉ်ကအတိုင်း။
ဒီအဆောင်တွေမှာ သူတို့အားလုံး အတူတကွရှိခဲ့ကြဖူးသည်။ ဒီလမ်းတွေထက်မှာ သူတို့ အားလုံး စစနောက်နောက်ဖြင့် သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့ကြဖူးသည်။
အခုတော့ ငယ်ရွယ်နုနယ်လှသည့် ညီငယ်ညီမငယ်များကိုငေးမောရင်း ထိုစဉ်တစ်ချိန်ကဘဝကို ဆွတ်ပျံ့စွာတမ်းတနေရုံသာ။
ဘေးနားကလင်းစစ်၏ အားမလိုအားမရသံကိုကြားတော့ ကျွန်တော်ပြုံးမိသည်။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့။ ဘေးနားကနေတွတ်ထိုးနေသော လင်းစစ်ခေါင်းကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲချုပ်ကာ ငယ်ငယ်ကလိုညှစ်လိုက်ပြီး လင်းစစ်တစ်ယောက် အသက်ရှူမဝ၍ ဝူးဝါးဝူးဝါး ဖြစ်လာတော့မှ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။
မဲ့ရှုံ့နေသည့်မျက်နှာထားနှင့်လင်းစစ် သူ့ဇက်ပိုးသူပွတ်ကာ ကျွန်တော့်ကိုပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ဆဲရေး လေသည်။
ထို့နောက် ငယ်စဉ်ကအတိုင်း သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တစ်ယောက်ပုခုံးတစ်ယောက်ဖက်ကာ တက်ကြွသောခြေလှမ်းတို့ကို ကန်တင်းန်ဆီဦးတည်လိုက်၏။
လင်းစစ်က စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံခြားDiplomaတစ်ခုရဖို့ကြိုးစားနေရချိန်ဖြစ်သလို၊ လင်းခေတ်ကလည်း တစ်ခြားသင်တန်းတစ်ခုတက်နေသည်မို့ ကျောင်းမှာမရှိနိုင်ခဲ့။ ဒီကြားထဲ သူတို့ယူသည့် မေဂျာက လူတက်များသည့်မေဂျာမို့ တန်းခွဲတွေအများကြီးရှိသဖြင့် လူတွေကတကွဲတပြား။
သူတို့၃ယောက် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တိတိပပသိခဲ့ကြသည်ကတတိယနှစ်ရောက်မှ…။
ထိုအချိန်ရောက်တော့ လင်းစစ်ရော၊ လင်းခေတ်ရောDiplomaအသီးသီးရနေပြီ။ သင်တန်းတွေ အားလုံးလည်းပြီးကုန်ပြီမို့ အရင်ကလောက်ကျောင်းမပျက်တော့။ နောက်ပြီး လူတွေလည်း နည်းသွားပြီမို့ သူတို့အားလုံးစုမိသွားသည်။
ပထမဆုံးနေ့ Family teacherက Roll callကောက်တော့ နာမည်ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်နေသည့် သူတို့၃ယောက်ကြောင့် ဆရာမအပါအဝင် တစ်တန်းလုံးပြုံးရသေးသည်။
ကြောငျးပုရဝုဏျထဲခွခေမြိတော့ ငယျစဥျအခြိနျတှဆေီ စိတျပွနျရောကျမိသလိုပငျ။
ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ၊ ကြောငျသားရေးရာ၊ စာသငျဆောငျ အရာအားလုံးက ဟိုစဥျကအတိုငျး။
ဒီအဆောငျတှမှော သူတို့အားလုံး အတူတကှရှိခဲ့ကွဖူးသညျ။ ဒီလမျးတှထေကျမှာ သူတို့ အားလုံး စစနောကျနောကျဖွငျ့ သှားလာလှုပျရှားခဲ့ကွဖူးသညျ။
အခုတော့ ငယျရှယျနုနယျလှသညျ့ ညီငယျညီမငယျမြားကိုငေးမောရငျး ထိုစဥျတဈခြိနျကဘဝကို ဆှတျပြံ့စှာတမျးတနရေုံသာ။
ဘေးနားကလငျးစဈ၏ အားမလိုအားမရသံကိုကွားတော့ ကြှနျတျောပွုံးမိသညျ။
ဒီတဈခေါကျတော့ ကြှနျတျောမနနေိုငျတော့။ ဘေးနားကနတှေတျထိုးနသေော လငျးစဈခေါငျးကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ဆှဲခြုပျကာ ငယျငယျကလိုညှဈလိုကျပွီး လငျးစဈတဈယောကျ အသကျရှူမဝ၍ ဝူးဝါးဝူးဝါး ဖွဈလာတော့မှ လှတျပေးလိုကျသညျ။
မဲ့ရှုံ့နသေညျ့မကျြနှာထားနှငျ့လငျးစဈ သူ့ဇကျပိုးသူပှတျကာ ကြှနျတျော့ကိုပဈြပဈြနှဈနှဈဆဲရေး လသေညျ။
ထို့နောကျ ငယျစဥျကအတိုငျး သူငယျခငျြးနှဈယောကျ တဈယောကျပုခုံးတဈယောကျဖကျကာ တကျကွှသောခွလှေမျးတို့ကို ကနျတငျးနျဆီဦးတညျလိုကျ၏။
လငျးစဈက စီးပှားရေးနှငျ့ပတျသကျသညျ့ နိုငျငံခွားDiplomaတဈခုရဖို့ကွိုးစားနရေခြိနျဖွဈသလို၊ လငျးခတျေကလညျး တဈခွားသငျတနျးတဈခုတကျနသေညျမို့ ကြောငျးမှာမရှိနိုငျခဲ့။ ဒီကွားထဲ သူတို့ယူသညျ့ မဂြောက လူတကျမြားသညျ့မဂြောမို့ တနျးခှဲတှအေမြားကွီးရှိသဖွငျ့ လူတှကေတကှဲတပွား။
သူတို့၃ယောကျ တဈယောကျနှငျ့တဈယောကျ တိတိပပသိခဲ့ကွသညျကတတိယနှဈရောကျမှ…။
ထိုအခြိနျရောကျတော့ လငျးစဈရော၊ လငျးခတျေရောDiplomaအသီးသီးရနပွေီ။ သငျတနျးတှေ အားလုံးလညျးပွီးကုနျပွီမို့ အရငျကလောကျကြောငျးမပကျြတော့။ နောကျပွီး လူတှလေညျး နညျးသှားပွီမို့ သူတို့အားလုံးစုမိသှားသညျ။
ပထမဆုံးနေ့ Family teacherက Roll callကောကျတော့ နာမညျခပျဆငျဆငျဖွဈနသေညျ့ သူတို့၃ယောကျကွောငျ့ ဆရာမအပါအဝငျ တဈတနျးလုံးပွုံးရသေးသညျ။
This entry was posted in အခန်းဆက်ဝတ္ထု on December 30, 2015 by linyeikhtin.
ညနေ၆နာရီ………။ ဒီဇင်ဘာ၂၃ရက် ၁၉၆၁ခုနှစ်………။
ကျွန်တော်ဒီစာကို New Yorkကနေ Los Angelesဆီသွားတဲ့ လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခုက အစပြုပြီး ရေုးဖြစ်ခဲ့သည်။
မနက်ဖြန်..Honoluluကျွန်းမှာရှိသည့် ကျွန်တော့်အိမ်ကိုရောက်လျှင် အိမ်နီးချင်းကလေး တွေကို ခရစ္စမတ်ပုံပြင်တစ်ချို့ ပြောပြရဦးမည်။
သူတို့က ကျွန်တော့်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုပေးထားကြသည်။ “စန်တာကလော့စ်ရှိသလား” ဆို သည့်မေးခွန်းပင်။
အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် ဒီကလေးတွေကို ယုတ္တိတန်သည့် အရိုးသားဆုံးအဖြေတစ်ခု မည်သို့ပေးရမှန်း ယခုထက်ထိကိုမသိသေးပေ။
ဘာပဲပြောပြော LAကို အချိန်မှီရောက်ရန်သာ မျှော်လင့်မိ၏။
ပိုင်းလော့က ကျွန်တော်တို့ကို သတင်းဆိုးတစ်ခုကြေညာလိုက်သည်။
LAမှာမြူတွေအရမ်းဆိုင်းနေသဖြင့် ဘယ်လေယာဉ်ကွင်းတွင်မှ လေယာဉ်ဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်။ ထို့ကြောင့်အယ်လ်အေနှင့်လည်းသိပ်မဝေးသည့် Ontarioရှိကွင်းပြင်တစ်ခုတွင် အရေးပေါ်ဆင်းသက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။
မနက်၃နာရီ ၁၂မိနစ် ဒီဇင်ဘာ၂၄ရက်။
မြေပြင်ပေါ်ဆင်းတော့ သတ်မှတ်ချိန်ထက်၆နာရီနောက်ကျမှရောက်သည်။ လေယာဉ်ပေါ် တွင် ပါလာသည့်ခရီးသည်များအားလုံးမှာ အေးလည်းအေး၊ ဆာလည်းဆာနေကြလေပြီ။ လာကြိုမည့် သူများနှင့်လည်း လွဲကုန်လေပြီ။ ထို့ထက်မက သေချာသည်ကတော့ ခရစ္စမတ်အကြိုနေ့တွင် အတော်များများ အိမ်ပြန်ရောက်မည်မဟုတ်တော့။
မမျှော်လင့်ပဲ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနှင့် ကြုံလိုက်ရတော့ ခရစ္စမတ်ပုံပြင်ကိစ္စသည်လည်း ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲရောက်မလာတော့။
ကျွန်တော်ဒီစာကို LAရှိလေယာဉ်ကွင်း တစ်ခုအတွင်းမှာ ထိုင်ရေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ခရစ္စမတ်ပုံပြင်ကိစ္စကို လုံးလုံးလျားလျားမေ့လျော့နေခဲ့သော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်၎နာရီ ခန့်က အဖြစ်အပျက်များကြောင့် ဒီစာကိုပြန်စမိသည်။
ကျွန်တော်တို့ဆင်းသက်ခဲ့သည့်နေရာမှာ အစတုန်းကကျွန်တော်တို့လေယာဉ်တစ်စင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့ခရီးသည်များသာရှိသော်လည်း ယခုတော့ဘဝတူ လေယာဉ်တွေ တစ်စင်းပြီးတစ်စင်း ဆိုက်လာလေပြီ။ စိတ်လှုပ်ရှားနေသည့် လူအုပ်ကြီးမှာလည်း တစ်စထက်တစ်စများပြားလာရာ ယခုဆို လူအယောက်၁၀၀၀လောက်ပင်ရှိတော့မည်။
ချိန်းထားသူများနှင့်လွဲကုန်သည်ကကိစ္စမရှိ။ ဘယ်အချိန်မှ အိမ်ပြန်ရောက်မည်ဆိုတာက ပြောလို့မရသဖြင့် အိမ်သားတွေစိတ်မပူရန် အကျိုးအကြောင်းလေးတော့ လူတိုင်းလိုလိုလှမ်းပြောချင် နေကြသည်။
သို့သော် ဖြစ်ချင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဖုန်းလိုင်းမမိ။ ကြေးနန်းရုံးကလည်း ပိတ်ထားသည်။ စားစရာနတ္ထိ…။ သောက်စရာနတ္ထိ…။
လေယာဉ်အမှုထမ်းများကတော့ ခရီးသည်များကို တတ်နိုင်သလောက်ရှင်းပြနေကြသည်။
ဝန်စည်စလယ်များမှာလည်း အကုန်အရောရောအနှောနှော ဖြစ်နေကြ၏။
ကိုယ်ကျင်လည်နေကျ နေရာမဟုတ်သဖြင့် ဘယ်ဘတ်စ်ကားက ဘယ်နေရာထိရောက် သည်ကိုလည်း တစ်ဦးမှသိကြပုံမပေါ်။
ကလေးတွေက ငိုနေကြသည်။ မိန်းမသားတွေက ညည်းတွားနေကြပြီး ယောက်ျားများက တော့ အော်ဟစ်နေကြ၏။
ဆူညံပွက်လောရိုက်နေသည်မှာ ပုရွက်အုံကို တုတ်နှင့်ထိုးသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ဒီမြင်ကွင်း ကိုကြည့်ရင်း အေးချမ်းလှသည့် ခရစ္စမတ်ကာလ ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစဟု ကျွန်တော်အတွေးပွားနေမိ ပါသည်။
ဤမျှဆူညံပွက်လောရိုက်နေသည့်လူအုပ်ကြီးအတွင်းမှ ယုံကြည်ချက်ရှိ၍အလောသုံးဆယ် မနိုင်သည့် အသံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသည်။ ပြောရလျှင် ချာ့ခ်ျကျောင်းမှ ခေါင်းလောင်းသံလိုပင်…။ ကြည်လင်သည်၊ အေးချမ်းသည်၊ ကရုဏာအပြည့်ပါသည်။
“အခု…စိတ်မပူပါနဲ့တော့ အစ်မကြီး” ထိုအသံရှင်ကပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူ အစ်မကြီးရဲ့အထုပ်အပိုးတွေဝိုင်းရှာကြမယ်။ ပြီးတာနဲ့ အစ်မကြီး သွားချင်တဲ့မြို့ဆီ အချိန်မှီရောက်စေရမယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါ။”
ဒီစကားသံဟာလေယာဉ်ဆင်းကတည်းကနေ အခုချိန်အတွင်း ကျွန်တော်ကြားခဲ့သမျှတွေ ထဲက အကြင်နာဆုံးစကားတစ်ခွန်းပါပဲ။
ဒါကြောင့်မို့ လူအုပ်ကြားထဲက ထိုသူ့ကိုအသည်းအသန် လိုက်ရှာကြည့်တော့………
လူပုံက ဂင်တိုတို၊ပုကွကွ။ မျက်နှာပေါ်တွင်ပေါက်နေသည့် အမွှေးအမျှင်များနှင့် မလိုက် အောင်ကို သူ့မျက်နှာကပြုံးချိုနေသည်။ သူ့ခေါင်းပေါ်တွင်တော့ ရုံးဦးထုပ်တစ်လုံးကိုဆောင်းထားပြီး အနီရောင်ဆွယ်တာကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ ဦးထုပ်၏အောက်နားစတွင်တော့ ဆံပင်ဖြူဖြူတို့ ကျနေ ကြသည်။ အမဲလိုက်ဘွတ်ဖိနပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး လက်ဖြစ်လှည်းတစ်စင်းနှင့်သူ့ဟန်ပန်မှာ ရေခဲပြင် သမင်များကိုထားခဲ့ပြီး ခရီးတိုတစ်ခုထွက်လာသည့် စန်တာနှယ်ပင်။
ထိုသူက သူ့လှည်းဘေးတွင်မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး လှည်းပေါ်ရှိပူပူနွေးနွေးကော်ဖီဘူးများ နှင့် ကိတ်မုန့်ဘူးများကို ဖွင့်ဖောက်နေသည်။
“အစ်မကြီးရဲ့အထုပ်အပိုးတွေကို ကျွန်တော်ရှာနေတုန်း ကော်ဖီပူပူလေး သောက်ထားနှင့် ပေါ့”
ထိူမြင်ကွင်းကိုမြင်တော့ သူ့လှည်းဘေးတွင် တမုဟုတ်ခြင်းစည်ကားသွားသည်။ ကော်ဖီ ဘူးများကိုလှမ်းယူကြသည့် လူတန်းကြီးဆိုသည်မှာ ရှည်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း…။
ဒီလောက်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေသည့်အပြင် အထုပ်အပိုးများကိုဝိုင်းရှာပေးနေရသည့်ကြားထဲက ဘေးနားရှိလူများကို “မယ်ရီခရစ္စမတ်”ဟု ပြန်ပြောနေလေသည်။
နောက်ဆုံးတော့ သူဝိုင်းရှာပေးသည့် အထုပ်အပိုးများကိုတွေ့သွားသည်။
အထုပ်အပိုးများကို နေရာချပြီးချိန်မှာတော့ ထိုသူက ထိုအမျိုးသမီးအပါအဝင် တခြား သူများ ကိုပြောလိုက်သည်။
“ကျွန်တော့်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါ။ အဲဒီမြို့ဆီသွားမယ့် ဘတ်စ်ကားပေါ်ကျွန်တော်တင်ပေးပါ့မယ်။”
ထိုအမျိုးသမီးနှင့်အခြားခရီးတူသူများကို လိုက်ပို့ပြီးချိန်မှာတော့ ခရစ်စ်တစ်ယောက် (ဒါ…… ကျွန်တော်ပထမဆုံး သူ့ကိုပေးမိတဲ့ နာမည်ပါ။) သူတို့ဆီကို ပြန်လာခဲ့သည်။
ကံဆိုးသည်လားကောင်းသည်လားတော့မပြောတတ်။ ကျွန်တော်စီးရမည့် ဘတ်စ်ကားက နောက်တစ်နာရီကျော်မှ လာလိမ့်မည်ဟု ခရစ်စ်ကပြောသည်။
ဘာရယ်မဟုတ်…။ သွားလို့လည်းမရ၊ လုပ်စရာလည်းမရှိသည့်အတူတူ ကျွန်တော်လည်း သူနှင့်အတူ ကော်ဖီတွေ၊မုန့်တွေ လိုက်ဝေပေးနေမိသည်။
ခရစ်စ်က မြူမှုန်ကြားထဲက နေရောင်ခြည်တစ်စနှင့်တူသည်။ လယ်ကွင်းထဲရှိ စိတ်ညစ် နေသူအကုန်လုံးကို သူတတ်နိုင်သလောက် ပြုံးပျော်စေရန် ကြိုးစားပေးခဲ့သည်။
ကော်ဖီနှင့်မုန့်တွေဝေပေးသည်။ ကလေးငယ်များကို စသည်။ ခရစ္စမတ်သီချင်းတွေ ဆိုပြသည်။ ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှန်းမသိသည့် ခရီးသည်များကို လမ်းညွှန်ပေးသည်။
အမျိုးသမီးတစ်ဦး မေ့လဲပြီးသတိလစ်သွားတုန်းကလည်း ရှူဆေးများ၊ စောင်များထုတ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ပင် ထိုအမျိုးသမီးသတိရလာစေရန် ပြုစုပေးခဲ့သည်။
ဒီလောက် သူတစ်ပါးအပေါ်ကူညီတတ်ပြီး စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်သူကို ကျွန်တော် တော် တော်လေး အံ့သြနေမိသည်။
သိချင်စိတ်က တားမနိုင်၊ဆီးမရဖြစ်လာသည်မို့ ကော်ဖီဝေနေရင်း သူ့ကို ကျွန်တော်မေး လိုက်သည်။
“အနွေးထည်အပြာရောင်ဝတ်ထားတဲ့ ကလေးမလေးကိုတွေ့လား။ အဲဒီကလေးမလေးကို ဟောဒီသကြားလုံးသွားပေး။ ပြီးတော့…အမေ့ဘေးနားမှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေပဲလျှောက်သွားနေရင် နောက်ဆို
ကျွန်တော်လဲသူကမ်းပေးသည့်သကြားလုံးကိုယူကာ သူပြောသလိုသွားလုပ်အပြီးမှာတော့ ခုနကမေးခွန်းကို ပြန်မေးပြန်သည်။
“ဦးကိုကုမ္ပဏီကခိုင်းလို့ လာလုပ်မဟုတ်ဘူးကွ။ ခုလိုလုပ်ပေးရတာ ပျော်လို့ကိုလုပ်တာ။
နှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလတိုင်း နှစ်ပတ်စာအားလပ်ရက်ကို ဦးကဒီကိုလာတယ်။ ပြီးတော့ ခရီး သည်တွေကိုကူညီတယ်။
မင်းတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ အခုလိုအချိန်မျိုးဆို အကူအညီလိုနေတဲ့ ခရီးသည်တွေက ထောင် ဂဏန်းလောက်ရှိတတ်တယ်။”
ထိုစဉ် တစ်နေရာ၌ လူတွေရုံးစုရုံးစုဖြစ်နေသည်။
အသက်ကြီးသလောက် ဖျတ်လတ်သောခရစ်စ်က ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းမေးသည်။
“ဟိတ်…ကောင်လေး ဟိုမှာကြည့်စမ်း။ အဲဒီမှာ ဖြစ်နေတာလဲ။”
ကလေးငယ်လေးကိုပွေ့ပြီး တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေသော မိခင်တစ်ဦးဆီ လက်ညှိုးထိုးရင်း တည် တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောသည်။
ထို့နောက်တော့ ကျွန်တော့်ကိုမျက်လုံးတစ်ဖက်မှိတ်ကာ အချက်ပြပြီး သူ၏လှည်းကို ထို ကလေးအမေဆီသို့ဆွဲသွားလေသည်။
ပိုနီးလာလေလေ မြင်ကွင်းကလည်း ပို၍ပို၍ပြတ်သားလာသည်။ လသားအရွယ် ကလေး ငယ်ကိုပွေ့ပြီး မိခင်ဖြစ်သည့်သူမကတော့ လက်ဆွဲအိတ်ပေါ်တွင် ထိုင်နေခြင်းပင်။
“ဒါသမီးရဲ့ကလေးလား။ ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကြည့်စမ်း။ ဒါနဲ့သမီးမှာဘာအခက်အခဲ ရှိလို့လဲကွဲ့”
အားကိုးသူရှာတွေ့ပြီဆိုသည့် အသိကြောင့်ပဲထင်သည်။ ထိုအမျိုးသမီးက ခရစ်စ်အား အ ကြောင်းစုံရှင်းပြရှာသည်။
သူမ၏ယောက်ျားဖြစ်သူမှာSan Diegoရှိ ဟော်တယ်တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကြောင်း၊ သူမ ယောက်ျားနှင့်မတွေ့သည်မှာလဲ တစ်နှစ်ခန့်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ယောက်ျားကလဲ သူမရှိရာမလာနိုင်သ ဖြင့် သူမကပင် လိုက်လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရှုံ့ရှုံ့ငိုရင်း ပြောပြရှာသည်။
ဒီပုံအတိုင်းသာဆို သူမယောက်ျားလည်း အတော်စိတ်ပူနေလောက်လေပြီ။ ပွေ့ထားသော ကလေးကလည်း ဗိုက်ဆာ၍ကြူကြူပါအောင် ငိုနေလေပြီ။
သို့သော် ခရစ်စ်ကတော့ အတွေ့အကြုံရှိသူပီပီ ယခုအခြေအနေကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပုံက သပ်ရပ်လွန်းလှသည်။
ထိုသို့ ပြုံးကာရယ်ကာပြောရင်း သူ့လှည်းပေါ်မှ နို့တစ်ဘူးနှင့် ကော်ဖီတစ်ဘူးယူကာ ထိုအမျိုးသမီးကို ကမ်းပေးလိုက်သည်။
ထို့နောက်…LAဆီသွားမည့် ကားတစ်စီးပေါ်သို့ လိုက်တင်ပေးသည်။ ထို့ပြင် သူမထံမှလဲ သူမ ယောက်ျား၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းလိုက်ပြီး ဘာကြောင့်နောက်ကျနေသည်ဆိုသည့်အကြောင်းပါ ပြောပေးမည်ဟုဆိုလေသည်။
ငိုရှိုက်ရသဖြင့်မောပန်းပြီး အိပ်ပျော်သွာသောကလေးငယ်ကို လက်ဖြင့်ပိုက်ထားရင်း သူမ ကပြောလိုက်သည်။
“မယ်ရီခရစ္စမတ်ပါ ဦးရေ။ ဦးလဲ ဒီခရစ္စမတ်မှာ လက်ဆောင်တွေအများကြီးရပါစေ”
“ကျေးဇူးပါသမီးရေ။ ဦးကတော့ ဒီကမ္ဘာမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ လက်ဆောင်တွေရပြီးပြီ ကွဲ့။
စကားမစပ် ဦးကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အထဲမှာ သမီးလည်းပါတယ်နော်”
ထို့နောက် ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေသော လူအုပ်ဖက်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ရင်း
“အဖိုးအိုတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေတာထင်ပါရဲ့။ ကံကောင်းပါစေသမီးရေ။ ဦးကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ထပ်လက်ဆောင်တစ်ခု ထပ်ပေးလိုက်ဦးမဟေ့”
ပြောရင်ဆိုရင်း ခရစ်စ်တစ်ယောက် ဘတ်စ်ကားကိုကျောခိုင်းလိုက်သည်။ ကျွန်တော်လဲ ခရစ်စ်နောက်ကို လိုက်လာခဲ့မိသည်။ ဟိုင်းဝေးကားဖြစ်သဖြင့် ကားကအတော်နှင့်ထွက်ဦးမည့်ပုံမှာ မပေါ်။
သုံး၊လေး၊ငါးလှမ်းမျှ လျှောက်ပြီးချိန်မှာတော့ ခရစ်စ်ကတော့ ကျွန်တော့်ဖက်သို့ ဆတ်ခနဲ လှည့်ပြီးပြောသည်။
“မင်းလဲ ဒီကားနဲ့ပဲ LAထိသွားမှာနော်”
“ဒါဆိုဟန်ကျတာပေါ့ကွာ။ ဒီအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာ မင်းဟာ လက်ထောက်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကဲ…ဒီမှာကြည့် ခုမင်းကိုခရစ္စမတ်လက်ဆောင်တစ်ခု ပေးစရာရှိတယ်။မင်း ဒီကားစုတ်နဲ့ LAထိလိုက်သွား။ ကလေးနဲ့ကလေးအမေကို စောင့်ရှောက်။ ဟုတ်ပြီလား”
တစ်ဆက်တည်းဆိုသလို သူ့အိတ်ကပ်ထဲမှ စာရွက်ခေါက်လေးကိုထုတ်လိုက်ပြီး
“နောက်ပြီးဟိုရောက်ရင်လဲ သူ့ယောက်ျားကို ဘာလို့နောက်ကျရတယ်ဆိုတာ အသေချာ ရှင်းပြလိုက်ဦး”
သူပြောချင်တာပြောပြီသွားတော့ ကျွန်တော့်အဖြေတောင်မစောင့်ပဲ ခရစ်စ်တစ်ယောက် လှည့်ထွက်သွားသည်။ ကျွန်တော်ဘာပြန်ဖြေမလဲ သိနေသည့်နှယ်။
ထို့နောက် ကျွန်တော်လည်း ခရစ်စ်ပြောသည့်အတိုင်း ဘတ်စ်ကားဆီသို့ ခြေဦးပြန်လှည့် လိုက်သည်။
ကားပေါ်ရောက်တော့ ကလေးအမေဘေးတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး သူမထံမှကလေးကို ယူထားလိုက်သည်။
ပြူတင်းပေါက်ဖက်မျက်နှာမူမိတော့ လူအုပ်ကြားထဲတရွေ့ရွေ့ တိုးဝင်သွားသောခရစ်စ်ကို လေးစားစဖွယ်တွေ့လိုက်ရသည်။
ခံစားရသည့်ခံစားမှုက ဘာနှင့်မှမလဲနိုင်အောင် ဝမ်းသာကြည်နူးမှုများလွှမ်းနေသည်။
စိတ်ပြန်တည်ငြိမ်လာတော့ မိသားစုအကြောင်း၊ ခရစ္စမတ်အကြောင်းက ခေါင်းထဲရောက် လာသည်။
ခုတော့ ဘေးအိမ်က ကလေးများမေးသည့် “စန်တာကလော့စ်ရှိရဲ့လား”ဆိုသည့် မေးခွန်း အတွက် အဖြေရသွားလေပြီ။
စာကြွင်း>>>”William.J.Lederer”၏ “Is thereaSanta Claus?”ကို ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ညနေ၆နာရီ………။ ဒီဇငျဘာ၂၃ရကျ ၁၉၆၁ခုနှဈ………။
ကြှနျတျောဒီစာကို New Yorkကနေ Los Angelesဆီသှားတဲ့ လယောဥျခရီးစဥျတဈခုက အစပွုပွီး ရေုးဖွဈခဲ့သညျ။
မနကျဖွနျ..Honoluluကြှနျးမှာရှိသညျ့ ကြှနျတျော့အိမျကိုရောကျလှငျြ အိမျနီးခငျြးကလေး တှကေို ခရစ်စမတျပုံပွငျတဈခြို့ ပွောပွရဦးမညျ။
သူတို့က ကြှနျတျော့ကိုမေးခှနျးတဈခုပေးထားကွသညျ။ “စနျတာကလော့ဈရှိသလား” ဆို သညျ့မေးခှနျးပငျ။
အမှနျအတိုငျးပွောရလှငျြ ဒီကလေးတှကေို ယုတ်တိတနျသညျ့ အရိုးသားဆုံးအဖွတေဈခု မညျသို့ပေးရမှနျး ယခုထကျထိကိုမသိသေးပေ။
ဘာပဲပွောပွော LAကို အခြိနျမှီရောကျရနျသာ မြှျောလငျ့မိ၏။
ပိုငျးလော့က ကြှနျတျောတို့ကို သတငျးဆိုးတဈခုကွညောလိုကျသညျ။
LAမှာမွူတှအေရမျးဆိုငျးနသေဖွငျ့ ဘယျလယောဥျကှငျးတှငျမှ လယောဥျဆငျးဖို့မဖွဈနိုငျ။ ထို့ကွောငျ့အယျလျအနှေငျ့လညျးသိပျမဝေးသညျ့ Ontarioရှိကှငျးပွငျတဈခုတှငျ အရေးပျေါဆငျးသကျရမညျ ဖွဈကွောငျး ကွညောသညျ။
မနကျ၃နာရီ ၁၂မိနဈ ဒီဇငျဘာ၂၄ရကျ။
မွပွေငျပျေါဆငျးတော့ သတျမှတျခြိနျထကျ၆နာရီနောကျကမြှရောကျသညျ။ လယောဥျပျေါ တှငျ ပါလာသညျ့ခရီးသညျမြားအားလုံးမှာ အေးလညျးအေး၊ ဆာလညျးဆာနကွေလပွေီ။ လာကွိုမညျ့ သူမြားနှငျ့လညျး လှဲကုနျလပွေီ။ ထို့ထကျမက သခြောသညျကတော့ ခရစ်စမတျအကွိုနတှေ့ငျ အတျောမြားမြား အိမျပွနျရောကျမညျမဟုတျတော့။
မမြှျောလငျ့ပဲ ဒီလိုအခွအေနမြေိုးနှငျ့ ကွုံလိုကျရတော့ ခရစ်စမတျပုံပွငျကိစ်စသညျလညျး ကြှနျတေျာ့ခေါငျးထဲရောကျမလာတော့။
ကြှနျတျောဒီစာကို LAရှိလယောဥျကှငျး တဈခုအတှငျးမှာ ထိုငျရေးဖွဈခဲ့သညျ။
ခရစ်စမတျပုံပွငျကိစ်စကို လုံးလုံးလြားလြားမလြေ့ော့နခေဲ့သျောလညျး လှနျခဲ့သညျ့၎နာရီ ခနျ့က အဖွဈအပကျြမြားကွောငျ့ ဒီစာကိုပွနျစမိသညျ။
ကြှနျတျောတို့ဆငျးသကျခဲ့သညျ့နရောမှာ အစတုနျးကကြှနျတျောတို့လယောဥျတဈစငျးနှငျ့ ကြှနျတျောတို့ခရီးသညျမြားသာရှိသျောလညျး ယခုတော့ဘဝတူ လယောဥျတှေ တဈစငျးပွီးတဈစငျး ဆိုကျလာလပွေီ။ စိတျလှုပျရှားနသေညျ့ လူအုပျကွီးမှာလညျး တဈစထကျတဈစမြားပွားလာရာ ယခုဆို လူအယောကျ၁၀၀၀လောကျပငျရှိတော့မညျ။
ခြိနျးထားသူမြားနှငျ့လှဲကုနျသညျကကိစ်စမရှိ။ ဘယျအခြိနျမှ အိမျပွနျရောကျမညျဆိုတာက ပွောလို့မရသဖွငျ့ အိမျသားတှစေိတျမပူရနျ အကြိုးအကွောငျးလေးတော့ လူတိုငျးလိုလိုလှမျးပွောခငျြ နကွေသညျ။
သို့သျော ဖွဈခငျြတော့ ဒီနရောမှာ ဖုနျးလိုငျးမမိ။ ကွေးနနျးရုံးကလညျး ပိတျထားသညျ။ စားစရာနတ်ထိ…။ သောကျစရာနတ်ထိ…။
လယောဥျအမှုထမျးမြားကတော့ ခရီးသညျမြားကို တတျနိုငျသလောကျရှငျးပွနကွေသညျ။
ဝနျစညျစလယျမြားမှာလညျး အကုနျအရောရောအနှောနှော ဖွဈနကွေ၏။
ကိုယျကငျြလညျနကြေ နရောမဟုတျသဖွငျ့ ဘယျဘတျဈကားက ဘယျနရောထိရောကျ သညျကိုလညျး တဈဦးမှသိကွပုံမပျေါ။
ကလေးတှကေ ငိုနကွေသညျ။ မိနျးမသားတှကေ ညညျးတှားနကွေပွီး ယောကျြားမြားက တော့ အျောဟဈနကွေ၏။
ဆူညံပှကျလောရိုကျနသေညျမှာ ပုရှကျအုံကို တုတျနှငျ့ထိုးသကဲ့သို့ဖွဈသညျ။ ဒီမွငျကှငျး ကိုကွညျ့ရငျး အေးခမျြးလှသညျ့ ခရစ်စမတျကာလ ဟုတျမှဟုတျပါလစေဟု ကြှနျတျောအတှေးပှားနမေိ ပါသညျ။
ဤမှဆြူညံပှကျလောရိုကျနသေညျ့လူအုပျကွီးအတှငျးမှ ယုံကွညျခကျြရှိ၍အလောသုံးဆယျ မနိုငျသညျ့ အသံတဈခုကိုကွားလိုကျရသညျ။ ပွောရလှငျြ ခြာ့ချြကြောငျးမှ ခေါငျးလောငျးသံလိုပငျ…။ ကွညျလငျသညျ၊ အေးခမျြးသညျ၊ ကရုဏာအပွညျ့ပါသညျ။
“အခု…စိတျမပူပါနဲ့တော့ အဈမကွီး” ထိုအသံရှငျကပွောသညျ။
“ကြှနျတျောတို့အားလုံးအတူတူ အဈမကွီးရဲ့အထုပျအပိုးတှဝေိုငျးရှာကွမယျ။ ပွီးတာနဲ့ အဈမကွီး သှားခငျြတဲ့မွို့ဆီ အခြိနျမှီရောကျစရေမယျ။ အားလုံးအဆငျပွသှေားမှာပါ။”
ဒီစကားသံဟာလယောဥျဆငျးကတညျးကနေ အခုခြိနျအတှငျး ကြှနျတျောကွားခဲ့သမှတြှေ ထဲက အကွငျနာဆုံးစကားတဈခှနျးပါပဲ။
ဒါကွောငျ့မို့ လူအုပျကွားထဲက ထိုသူ့ကိုအသညျးအသနျ လိုကျရှာကွညျ့တော့………
လူပုံက ဂငျတိုတို၊ပုကှကှ။ မကျြနှာပျေါတှငျပေါကျနသေညျ့ အမှေးအမှငျြမြားနှငျ့ မလိုကျ အောငျကို သူ့မကျြနှာကပွုံးခြိုနသေညျ။ သူ့ခေါငျးပျေါတှငျတော့ ရုံးဦးထုပျတဈလုံးကိုဆောငျးထားပွီး အနီရောငျဆှယျတာကို ဝတျဆငျထားသညျ။ ဦးထုပျ၏အောကျနားစတှငျတော့ ဆံပငျဖွူဖွူတို့ ကနြေ ကွသညျ။ အမဲလိုကျဘှတျဖိနပျကို ဝတျဆငျထားပွီး လကျဖွဈလှညျးတဈစငျးနှငျ့သူ့ဟနျပနျမှာ ရခေဲပွငျ သမငျမြားကိုထားခဲ့ပွီး ခရီးတိုတဈခုထှကျလာသညျ့ စနျတာနှယျပငျ။
ထိုသူက သူ့လှညျးဘေးတှငျမတျတပျရပျလိုကျပွီး လှညျးပျေါရှိပူပူနှေးနှေးကျောဖီဘူးမြား နှငျ့ ကိတျမုနျ့ဘူးမြားကို ဖှငျ့ဖောကျနသေညျ။
“အဈမကွီးရဲ့အထုပျအပိုးတှကေို ကြှနျတျောရှာနတေုနျး ကျောဖီပူပူလေး သောကျထားနှငျ့ ပေါ့”
ထိူမွငျကှငျးကိုမွငျတော့ သူ့လှညျးဘေးတှငျ တမုဟုတျခွငျးစညျကားသှားသညျ။ ကျောဖီ ဘူးမြားကိုလှမျးယူကွသညျ့ လူတနျးကွီးဆိုသညျမှာ ရှညျလိုကျသညျ့ဖွဈခွငျး…။
ဒီလောကျရှုပျရှကျခတျနသေညျ့အပွငျ အထုပျအပိုးမြားကိုဝိုငျးရှာပေးနရေသညျ့ကွားထဲက ဘေးနားရှိလူမြားကို “မယျရီခရစ်စမတျ”ဟု ပွနျပွောနလေသေညျ။
နောကျဆုံးတော့ သူဝိုငျးရှာပေးသညျ့ အထုပျအပိုးမြားကိုတှသှေ့ားသညျ။
အထုပျအပိုးမြားကို နရောခပြွီးခြိနျမှာတော့ ထိုသူက ထိုအမြိုးသမီးအပါအဝငျ တခွား သူမြား ကိုပွောလိုကျသညျ။
“ကြှနျတျော့နောကျကိုလိုကျခဲ့ပါ။ အဲဒီမွို့ဆီသှားမယျ့ ဘတျဈကားပျေါကြှနျတျောတငျပေးပါ့မယျ။”
ထိုအမြိုးသမီးနှငျ့အခွားခရီးတူသူမြားကို လိုကျပို့ပွီးခြိနျမှာတော့ ခရဈဈတဈယောကျ (ဒါ…… ကြှနျတျောပထမဆုံး သူ့ကိုပေးမိတဲ့ နာမညျပါ။) သူတို့ဆီကို ပွနျလာခဲ့သညျ။
ကံဆိုးသညျလားကောငျးသညျလားတော့မပွောတတျ။ ကြှနျတျောစီးရမညျ့ ဘတျဈကားက နောကျတဈနာရီကြျောမှ လာလိမျ့မညျဟု ခရဈဈကပွောသညျ။
ဘာရယျမဟုတျ…။ သှားလို့လညျးမရ၊ လုပျစရာလညျးမရှိသညျ့အတူတူ ကြှနျတျောလညျး သူနှငျ့အတူ ကျောဖီတှေ၊မုနျ့တှေ လိုကျဝပေေးနမေိသညျ။
ခရဈဈက မွူမှုနျကွားထဲက နရေောငျခွညျတဈစနှငျ့တူသညျ။ လယျကှငျးထဲရှိ စိတျညဈ နသေူအကုနျလုံးကို သူတတျနိုငျသလောကျ ပွုံးပြျောစရေနျ ကွိုးစားပေးခဲ့သညျ။
ကျောဖီနှငျ့မုနျ့တှဝေပေေးသညျ။ ကလေးငယျမြားကို စသညျ။ ခရစ်စမတျသီခငျြးတှေ ဆိုပွသညျ။ ဘယျသှားလို့ဘယျလာရမှနျးမသိသညျ့ ခရီးသညျမြားကို လမျးညှနျပေးသညျ။
အမြိုးသမီးတဈဦး မလေဲ့ပွီးသတိလဈသှားတုနျးကလညျး ရှူဆေးမြား၊ စောငျမြားထုတျပွီး သူကိုယျတိုငျပငျ ထိုအမြိုးသမီးသတိရလာစရေနျ ပွုစုပေးခဲ့သညျ။
ဒီလောကျ သူတဈပါးအပျေါကူညီတတျပွီး စိတျရှညျသညျးခံတတျသူကို ကြှနျတျော တျော တျောလေး အံ့သွနမေိသညျ။
သိခငျြစိတျက တားမနိုငျ၊ဆီးမရဖွဈလာသညျမို့ ကျောဖီဝနေရေငျး သူ့ကို ကြှနျတျောမေး လိုကျသညျ။
“အနှေးထညျအပွာရောငျဝတျထားတဲ့ ကလေးမလေးကိုတှလေ့ား။ အဲဒီကလေးမလေးကို ဟောဒီသကွားလုံးသှားပေး။ ပွီးတော့…အမဘေ့ေးနားမှာ ငွိမျငွိမျမနပေဲလြှောကျသှားနရေငျ နောကျဆို
ကြှနျတျောလဲသူကမျးပေးသညျ့သကွားလုံးကိုယူကာ သူပွောသလိုသှားလုပျအပွီးမှာတော့ ခုနကမေးခှနျးကို ပွနျမေးပွနျသညျ။
“ဦးကိုကုမ်ပဏီကခိုငျးလို့ လာလုပျမဟုတျဘူးကှ။ ခုလိုလုပျပေးရတာ ပြျောလို့ကိုလုပျတာ။
နှဈစဥျဒီဇငျဘာလတိုငျး နှဈပတျစာအားလပျရကျကို ဦးကဒီကိုလာတယျ။ ပွီးတော့ ခရီး သညျတှကေိုကူညီတယျ။
မငျးတှတေဲ့အတိုငျးပဲ အခုလိုအခြိနျမြိုးဆို အကူအညီလိုနတေဲ့ ခရီးသညျတှကေ ထောငျ ဂဏနျးလောကျရှိတတျတယျ။”
ထိုစဥျ တဈနရော၌ လူတှရေုံးစုရုံးစုဖွဈနသေညျ။
အသကျကွီးသလောကျ ဖတျြလတျသောခရဈဈက ကြှနျတျော့ကိုလှမျးမေးသညျ။
“ဟိတျ…ကောငျလေး ဟိုမှာကွညျ့စမျး။ အဲဒီမှာ ဖွဈနတောလဲ။”
ကလေးငယျလေးကိုပှပွေီ့း တရှုံ့ရှုံ့ငိုနသေော မိခငျတဈဦးဆီ လကျညှိုးထိုးရငျး တညျ တညျငွိမျငွိမျပွောသညျ။
ထို့နောကျတော့ ကြှနျတေျာ့ကိုမကျြလုံးတဈဖကျမှိတျကာ အခကျြပွပွီး သူ၏လှညျးကို ထို ကလေးအမဆေီသို့ဆှဲသှားလသေညျ။
ပိုနီးလာလလေေ မွငျကှငျးကလညျး ပို၍ပို၍ပွတျသားလာသညျ။ လသားအရှယျ ကလေး ငယျကိုပှပွေီ့း မိခငျဖွဈသညျ့သူမကတော့ လကျဆှဲအိတျပျေါတှငျ ထိုငျနခွေငျးပငျ။
“ဒါသမီးရဲ့ကလေးလား။ ခဈြစရာကောငျးလိုကျတာကွညျ့စမျး။ ဒါနဲ့သမီးမှာဘာအခကျအခဲ ရှိလို့လဲကှဲ့”
အားကိုးသူရှာတှပွေီ့ဆိုသညျ့ အသိကွောငျ့ပဲထငျသညျ။ ထိုအမြိုးသမီးက ခရဈဈအား အ ကွောငျးစုံရှငျးပွရှာသညျ။
သူမ၏ယောကျြားဖွဈသူမှာSan Diegoရှိ ဟျောတယျတဈခုတှငျ အလုပျလုပျကွောငျး၊ သူမ ယောကျြားနှငျ့မတှသေ့ညျမှာလဲ တဈနှဈခနျ့ရှိသှားပွီဖွဈကွောငျး၊ ယောကျြားကလဲ သူမရှိရာမလာနိုငျသ ဖွငျ့ သူမကပငျ လိုကျလာရခွငျးဖွဈကွောငျး တရှုံ့ရှုံ့ငိုရငျး ပွောပွရှာသညျ။
ဒီပုံအတိုငျးသာဆို သူမယောကျြားလညျး အတျောစိတျပူနလေောကျလပွေီ။ ပှထေ့ားသော ကလေးကလညျး ဗိုကျဆာ၍ကွူကွူပါအောငျ ငိုနလေပွေီ။
သို့သျော ခရဈဈကတော့ အတှအေ့ကွုံရှိသူပီပီ ယခုအခွအေနကေို ပွနျလညျတုံ့ပွနျပုံက သပျရပျလှနျးလှသညျ။
ထိုသို့ ပွုံးကာရယျကာပွောရငျး သူ့လှညျးပျေါမှ နို့တဈဘူးနှငျ့ ကျောဖီတဈဘူးယူကာ ထိုအမြိုးသမီးကို ကမျးပေးလိုကျသညျ။
ထို့နောကျ…LAဆီသှားမညျ့ ကားတဈစီးပျေါသို့ လိုကျတငျပေးသညျ။ ထို့ပွငျ သူမထံမှလဲ သူမ ယောကျြား၏ဖုနျးနံပါတျကိုတောငျးလိုကျပွီး ဘာကွောငျ့နောကျကနြသေညျဆိုသညျ့အကွောငျးပါ ပွောပေးမညျဟုဆိုလသေညျ။
ငိုရှိုကျရသဖွငျ့မောပနျးပွီး အိပျပြျောသှာသောကလေးငယျကို လကျဖွငျ့ပိုကျထားရငျး သူမ ကပွောလိုကျသညျ။
“မယျရီခရစ်စမတျပါ ဦးရေ။ ဦးလဲ ဒီခရစ်စမတျမှာ လကျဆောငျတှအေမြားကွီးရပါစေ”
“ကြေးဇူးပါသမီးရေ။ ဦးကတော့ ဒီကမ်ာဘမှာ အကောငျးဆုံးဆိုတဲ့ လကျဆောငျတှရေပွီးပွီ ကှဲ့။
စကားမစပျ ဦးကိုလကျဆောငျပေးတဲ့အထဲမှာ သမီးလညျးပါတယျနျော”
ထို့နောကျ ရုတျရုတျသဲသဲဖွဈနသေော လူအုပျဖကျကို တဈခကျြလှညျ့ကွညျ့ရငျး
“အဖိုးအိုတဈယောကျ ဒုက်ခရောကျနတောထငျပါရဲ့။ ကံကောငျးပါစသေမီးရေ။ ဦးကတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုနောကျထပျလကျဆောငျတဈခု ထပျပေးလိုကျဦးမဟေ့”
ပွောရငျဆိုရငျး ခရဈဈတဈယောကျ ဘတျဈကားကိုကြောခိုငျးလိုကျသညျ။ ကြှနျတျောလဲ ခရဈဈနောကျကို လိုကျလာခဲ့မိသညျ။ ဟိုငျးဝေးကားဖွဈသဖွငျ့ ကားကအတျောနှငျ့ထှကျဦးမညျ့ပုံမှာ မပျေါ။
သုံး၊လေး၊ငါးလှမျးမြှ လြှောကျပွီးခြိနျမှာတော့ ခရဈဈကတော့ ကြှနျတျော့ဖကျသို့ ဆတျခနဲ လှညျ့ပွီးပွောသညျ။
“မငျးလဲ ဒီကားနဲ့ပဲ LAထိသှားမှာနျော”
“ဒါဆိုဟနျကတြာပေါ့ကှာ။ ဒီအခြိနျခဏလေးအတှငျးမှာ မငျးဟာ လကျထောကျကောငျး တဈယောကျ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ကဲ…ဒီမှာကွညျ့ ခုမငျးကိုခရစ်စမတျလကျဆောငျတဈခု ပေးစရာရှိတယျ။မငျး ဒီကားစုတျနဲ့ LAထိလိုကျသှား။ ကလေးနဲ့ကလေးအမကေို စောငျ့ရှောကျ။ ဟုတျပွီလား”
တဈဆကျတညျးဆိုသလို သူ့အိတျကပျထဲမှ စာရှကျခေါကျလေးကိုထုတျလိုကျပွီး
“နောကျပွီးဟိုရောကျရငျလဲ သူ့ယောကျြားကို ဘာလို့နောကျကရြတယျဆိုတာ အသခြော ရှငျးပွလိုကျဦး”
သူပွောခငျြတာပွောပွီသှားတော့ ကြှနျတျော့အဖွတေောငျမစောငျ့ပဲ ခရဈဈတဈယောကျ လှညျ့ထှကျသှားသညျ။ ကြှနျတျောဘာပွနျဖွမေလဲ သိနသေညျ့နှယျ။
ထို့နောကျ ကြှနျတျောလညျး ခရဈဈပွောသညျ့အတိုငျး ဘတျဈကားဆီသို့ ခွဥေီးပွနျလှညျ့ လိုကျသညျ။
ကားပျေါရောကျတော့ ကလေးအမဘေေးတှငျ ဝငျထိုငျလိုကျပွီး သူမထံမှကလေးကို ယူထားလိုကျသညျ။
ပွူတငျးပေါကျဖကျမကျြနှာမူမိတော့ လူအုပျကွားထဲတရှရှေ့ေ့ တိုးဝငျသှားသောခရဈဈကို လေးစားစဖှယျတှလေို့ကျရသညျ။
ခံစားရသညျ့ခံစားမှုက ဘာနှငျ့မှမလဲနိုငျအောငျ ဝမျးသာကွညျနူးမှုမြားလှမျးနသေညျ။
စိတျပွနျတညျငွိမျလာတော့ မိသားစုအကွောငျး၊ ခရစ်စမတျအကွောငျးက ခေါငျးထဲရောကျ လာသညျ။
ခုတော့ ဘေးအိမျက ကလေးမြားမေးသညျ့ “စနျတာကလော့ဈရှိရဲ့လား”ဆိုသညျ့ မေးခှနျး အတှကျ အဖွရေသှားလပွေီ။
စာကွှငျး>>>”William.J.Lederer”၏ “Is thereaSanta Claus?”ကို ဘာသာပွနျဆိုသညျ။
This entry was posted in ဝတ္ထုတို, အတွေးစာစုများ(ရသ) on December 25, 2015 by linyeikhtin.
အဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းဖြင့် ကျယ်ပြောလှသော စက်ခန်းဆောင်ထဲသို့ သူ့သစ္စာတော်ခံ မှူးမတ်တစ်ဦး သုတ်သီးသုတ်ပြာဖြင့်ရောက်လာသည်။
အစဉ်သဖြင့်တည်ငြိမ်နေတတ်သည့်မှူးမတ်က ခုမျက်ပြူးဆန်ပြာဖြစ်နေသည်မို့ ဘုရင်လီယိုနိုက်စ် မျက်မှောင်ကြုတ်လိုက်ပြီး မနက်စာစားရင်းက အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
“မောင်မင်း ဘယ်လိုဖြစ်တုန်းကွဲ့။ အကျိုးအကြောင်းတင်စမ်း”
မင်းလမ်းတစ်လျှောက် သုတ်သုတ်ပြာပြာလျှောက်လာသည့် ဘုရင်လီယိုနိုက်စ်၏ဟန်ပန်ကြောင့် အမှုထမ်းအားလုံး မှင်သက်သွားကုန်ကြသည်။ သူတို့ဘုရင်လီယိုနိုက်စ် ဒီလိုရေးကြီးသုတ်ပြာနိုင်သည့်ပုံစံကို သူတို့မတွေ့ဖူးကြ။
လီယိုနိုက်စ်အတွက်ကတော့ အခုအချိန်မှာ ရာဇဣနြေ္ဒဆိုတာတွေကို ဘေးခဏချိတ်ထားပြီး ဧည့်ဆောင်သို့သာအလျင်အမြန်သွားနေမိသည်။
ဧည့်ခန်းဆောင်ရောက်တော့ တံခါးစောင့်များက သူ့ကိုဦးညွှတ်အရိုအသေပြုပြီး တံခါးဖွင့်ပေး လိုက်သည်။
တံခါးစောင့်များဖွင့်ပေးလိုက်သည့်တံခါးမှ ဧည့်ဆောင်ထဲသို့တစ်လှမ်းချင်းလှမ်းရင်း လီယိုနိုက်စ် တစ်ယောက် စိတ်လှုပ်ရှားနေမိ၏။
နောက်ဆုံး……… ထောင့်မှန်စတုဂံပုံကျွန်းစားပွဲကြီး တွင်ထိုင်နေသူများကိုတွေ့သွားချိန်မှာတော့ လီယိုနိုက်စ်တစ်ယောက် အံ့သြစိတ်ကြောင့်ပါးစပ်ကဆွံ့အသွားသလို တောက်ပစူးရှလှသည့် အရောင်အဝါ များကြောင့်လည်း မျက်လုံးများကိုမှိတ်လိုက်သည်။
ထို့နောက် မျက်လုံးကိုဖွင့်ချည်ပိတ်ချည်လုပ်ကာ ဝေခွဲမရသည့်လေသံဖြင့်
“ကျုပ်တို့က နတ်ဘုရားတွေပါ။ ကျပ်နာမည်ကဇုစ်၊ ဟောဒါကကျုပ်ညီတော် ပိုးဆိုက်ဒွန်နဲ့ ကျုပ်မိဖုရား ဟီးရာတို့ပါ”
“ခင်ဗျားကတော့ လူသားအားလုံးရဲ့ဘုရင် လီယိုနိုက်စ်မှတ်တယ်”
“ဟုတ်ပါတယ်အရှင် ကျွန်တော့်နာမည်က လီယိုနိုက်စ်ပါ”
လီယိုနိုက်စ်ပြောရင်းဆိုရင်း ဇုစ်ရှေ့မှောက်ဒူးထောက်ပြီးအရိုအသေပေးလိုက်သည်။ ဘုရင်ကပါ အရိုအသေပေးသည်ဆိုတော့ သူ့နောက်တော်ပါးရှိ မှူးမတ်တွေမှာလည်း ပြားပြားဝပ်လျက်။
“အို…အို ထပါ။ ခုလိုမျိုး အရိုအသေပေးစရာမလိုပါဘူး။ သင့်ကိုတောင်ကျုပ်တို့ကလေးစားလို့ စက်ရာဆောင်ဆီတိုက်ရိုက်မလာပဲ ဧည့်ဆောင်ကနေစောင့်နေခဲ့ပြီပဲ။ ခုလိုမျိး အရိုအသေမပေးပါနဲ့”
ဇုစ်စကားကြောင့် လီယိုနိုက်စ်နှင့်သူ့မှူးမတ်များ အသီးသီးမတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကြပြီး ထိုင်ခုံမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်ကြသည်။
“ဒါဆို အသင်တို့အခုလိုရောက်လာတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ”
“ဒီလိုပါ…။ ကျုပ်တို့နတ်ဘုရားတွေက ကောင်းကင်ဘုံမှာနေတယ်။ အဲ…မြေကြီးထဲမှာတော့ ကျပ်တို့နဲ့ညီအစ်ကိုတော်တဲ့ ဟေးဒီးစ်ဆိုတာနေတယ်။
သူကအတ္တကြီးတယ်။ နတ်ဘုရားတွေကိုအုပ်စိုးခွင့်သာမဟုတ်ဘူး စကြ်ာဝဠာကြီးရဲ့အုပ်စိုးခွင့် ကိုပါ သူကလိုချင်တယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် သူ့ကို မြေအောက်ပို့ခဲ့ရတာပဲ။
အခု ကျုပ်တို့ကိုအန္တရာယ်ပြုလို့မရတော့ တန်ခိုးသိဒ္ဓိအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ သင်တို့လူသားတွေကို အန္တရာယ်ပြုမယ့် အရိပ်အယောင်တွေတွေ့နေရတယ်။
ဒီတော့ သင်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့နတ်ဘုရားတွေက အကာအကွယ်ပေးလိုပါတယ်။
ဇုစ်စကားကြောင့် လီယိုနိုက်စ်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်အံ့သြမိပြန်သည်။ အင်အားကြီးမားပါသည် ဆိုသည့် နတ်ဘုရားတွေကတောင်မှ ကာကွယ်ပေးပါရစေဟု တောင်းဆိုလာသည်မဟုတ်လား။
မည်မျှဝမ်းမြောက်မိသည်မသိ လီယိုနိုက်စ်တစ်ယောက် ခဏတောင်မဆိုင်း
“ဟာ…ဒါဝမ်းသာစရာကိစ္စပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့က ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လက်ခံပါတယ်”
“ကောင်းပါပြီလီယိုနိုက်စ် ယခုအချိန်ကစပြီး သင်တို့လူသားတွေကို ကျွန်ုပ်တို့နတ်ဘုရားတွေက ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါ့မယ်”
“ဘာ…မင်းတို့က သူ့ရဲ့လက်အောက်ကို ခိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား”
ဟေးဒီးစ်အသံကဧည့်ဆောင်တစ်ခုလုံးသိမ့်သိမ့်တုန်သွားစေသည်။ လီယိုနိုက်စ်နှင့်သူ့မှူးမတ်များ ကတော့ ခေါင်းများကိုတွင်တွင်ငုံ့ထားကြဆဲသာ။
ဘုရင်ကရိုးနပ်စ်ကိုဖြုတ်ချတုန်းက ငါရယ်၊ ပိုးဆိုက်ဒွန်ရယ်၊ ဇုစ်ရယ် သုံးယောက်သားကတိပြု ခဲ့တယ်။ အာဏာကိုညီတူညီမျှခွဲဝေကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပေ့ါ။
တစ်ကယ်တမ်းလည်းတော်လှန်ရေးပြီးရော ပိုးဆိုက်ဒွန်ကရေထုကိုပဲအုပ်စိုးရတယ်။ ငါကတော့ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့လူသေတွေနဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုအုပ်စိုးရတယ်။ ဒီအချိန်မှာသူက စကြ်ာဝဠာရဲ့ အရှင်သခင်အဖြစ်ခံယူပြီး တစ်လောကလုံးကိုအုပ်စိုးတယ်။
ဟေးဒီးစ်က နာကျည်းခံခက်စွာဖြင့် လီယိုနိုက်စ်တို့ကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေသည်။
“ဒါ…ဒါဆို ကျုပ်တို့ သူကာကွယ်တာလက်မခံတော့ဘူးလို့ ပြန်ပြောလိုက်မယ်လေ”
ဘုရင်လီယိုနိုက်စ် ဟေးဒီးစ်ကို မဝံ့မရဲလေးပြောသည်။
“ရမလားကွ ရမလား။ ခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး လုပ်လို့ရမလား”
“ငါက မင်းတို့ကိုစေတနာသန့်သန့်နဲ့ပြောတာပါကွာ။ ငါကဒေါသကြီးတာမှန်တယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ငါ့လိုဖြစ်မှာစိုးရိမ်တယ်။ ငါ့လိုသစ္စာအဖောက်ခံရမှာစိုးရိမ်တယ်”
ဒီလိုကျတော့ဟေးဒီးစ်ကနူးညံ့လှသည်။ မျက်လုံးအစုံကကြည်လင်သန့်စင်လျက် လိမ်ညာနေဟန် တွေမရှိ။ ပကတိဖြူစင်စွာ…။
ထို့ကြောင့် သူ့အစီအစဉ်ကို စိတ်မသက်မသာနှင့်ပင် ထုတ်ပြောလိုက်သည်။
“ဘာလုပ်ရမလဲကွာ။ တိုက်ကြရုံပေါ့။ ငါ မင်းတို့အစားတိုက်ပေးပါ့မယ်။
ဒါဟာ မင်းတို့ငါ့လိုမျိုး ကလိန်အကျခံရမှာစိုးလို့ပဲ။
တစ်နည်း နတ်ဘုရားတို့ပျော်စံရာ အိုလံပီယံတောင်ထိပ်…။
သာယာတင့်မောလှစွာသော မြင်ကွင်းအစုံစုံကိုကြည့်ရင်း ဇုစ်တစ်ယောက်သက်ပြင်းချမိလိုက်၏။
စိတ်ပူပန်စွာမေးလာသည့်ပိုးဆိုက်ဒွန်ကို ဇုစ်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ နဂိုကတည်းက အနေအေး သည့်သူမို့ သူပူပန်နေသည့်အကြောင်းများကို ပိုးဆိုက်ဒွန်မရိပ်စားမိ။
“တို့တွေရဲ့တော်လှန်ရေးပြီးသွားတော့ ငါကစကြ်ာဝဠာရဲ့အုပ်စိုးသူအဖြစ်ခံယူတယ်။ မင်းကိုတော့ ရေထုကိုအုပ်စိုးစေဆိုပြီးသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ ဟေးဒီးစ်ကိုတော့ မြေအောက်ပို့ခဲ့တယ်။
ဒီတော့မှ ဇုစ်က အမြော်အမြင်ပြည့်စုံသူတစ်ဦး၏လေသံဖြင့်
“ဟေးဒီးစ်ဟာဒေါသကြီးတယ်။ နောက်ပြီး သူဟာတန်ခိုးသိပ်ထက်တယ်။ သူ့စိတ်ခံစားချက် အတိုင်း တန်ခိုးစွမ်းအားသုံးပြီးလျှောက်လုပ်မယ်ဆို အားလုံးရှုပ်ကုန်မှာပေါ့။ ဒီတော့ သူ့ကိုအပြစ်သားတွေပဲ ရှိတဲ့ မြေအောက်ကိုပို့ခဲ့ရတာ။
ငါလည်း ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ ဒီထက်ပိုစိတ်မကောင်းတာကတော့ ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း ရန်သူတွေလို သူစိမ်းပြင်ပြင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာပဲ”
မျက်လုံးများတွင်လည်း မျက်ရည်တို့ဝေ့သီရစ်ဆိုင်းလျက် အမှန်ပင်စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲနေဟန်က အထင်းသား။
ထိုအခိုက် ဇုစ်ရှေ့သို့ အပိုလိုနေနတ်သား အပြေးအလွှားရောက်လာသည်။
“အရှင်မင်းကြီး…… ဟေးဒီးစ်တစ်ယောက် လူသားတွေရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲက ပိုထရီဂိုရီမြို့တော်ကို တိုက်ခိုက်နေပါပြီ”
စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဘုရင်လီယိုနိုက်စ် မတ်တပ်ထရပ်မိသည်။
ဆက်သား၏ပြောစကားအရ ပိုထရီဂိုရီမြို့တော်တွင်မြေငလျင်တွေလှုပ်ပြီး လေဆင်နှာမောင်းများ ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်လာသည်ဟုသိရသည်။
လီယိုနိုက်စ် အလွန်အမင်းစိတ်ထိခိုက်ဟန်ဖြင့် ပလ္လင်ပေါ်ပြန်ထိုင်ချလိုက်စဉ်
“အောင်ပြီ လီယိုနိုက်စ်ရေ အောင်ပြီ။
ပိုထရီဂိုရီအပါအဝင် အနီးတစ်ဝိုက်ကမြို့ရွာတွေအကုန်လုံး ဇုစ်တို့လက်ထဲကနေ ငါပြန်ယူခဲ့ပြီ။ မြို့ကိုစောင့်ကြပ်နေတဲ့ သူတို့အစောင့်အကြပ်တွေသေအောင် ငလျင်နဲ့လေဆင်နှာမောင်းတော့ဝင်ခဲ့ရတယ်ဟေ့”
“မင်းကို ဇုစ်ရန်ကငါကာကွယ်ပေးတာထိရောက်ရဲ့လား လီယိုနိုက်စ်”
ဟေးဒီးစ်ကတော့ စစ်နိုင်သူတစ်ယောက်၏မျက်နှာထားမျိုးနှင့် ရွှင်ပျစွာစကားဆိုလေသည်။
သို့သော် လီယိုနိုက်စ်ကတော့ ဝမ်းမသာနိုင်ပါ။ မပျော်ရွှင်နိုင်ပါ။ ထိုအကြောင်းများကိုလည်း ဟေးဒီးစ်ကိုပြန်မပြောနိုင်ပါ။
ဟေးဒီးစ်ကတော့ သူ့အပြုအမူကို အားရကျေနပ်နေသည့်ပုံပင်။
လူအများသေကြေပျက်စီးရသည်ကို လီယိုနိုက်စ်မကြိုက်ပေမယ့် သူမတားခဲ့ပါ။ သူမတားဝံ့ခဲ့ပါ။
သူစက်တော်ခေါ်နေတာတောင်မနိုးသေး။ ဆက်သားတစ်ယောက်ရောက်နေပြန်သည်။ မနေ့က အတိုင်း ပိုထရီဂိုရီမြို့ကပင်။
လီယိုနိုက်စ် ဝတ်လဲတော်ကိုကပြာကယာလဲလိုက်ပြီး ထိုဆက်သားကိုရှေ့တော်သွင်းလိုက်၏။
“မောင်မင်း ဘာထူးလို့လဲကွဲ့။ ငါကိုယ်တော်ကိုတင်လျှောက်စမ်း”
ပိုထရီဂိုရီမြို့မှာ ငလျင်တွေလှုပ်၊လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ မိုးကြိုးတွေပစ်ပြီး မိုးတွေသည်းသည်းမည်းမည်းထပ်ရွာလာပါတယ်”
ကြားလိုက်ရသည့်သတင်းကြောင့် လီယိုနိုက်စ်တစ်ယောက် ခြေဖျားလက်ဖျားများပင်အေးစက် သွားသည်။
ဘုရား ဘုရား။ ဖြစ်ရလေ။
ကပ်ဆိုးတစ်ခုနှင့်ကြုံလိုက်ရလို့ နေစရာမဲ့နေသည့် သူ့တိုင်းသူပြည်သားတွေ ရေထဲမိုးထဲမှာ ခိုက်ခိုက်တုန်နေကြမည့်ပုံကိုတွေးမိရင်း လီယိုနိုက်စ်ဝမ်းနည်းလာမိသည်။
အသံပိုင်ရှင်ကိုသူသိသည်။ သို့သော် နှုတ်မဆက်မိ။ နှုတ်ဆက်ချင်စိတ်လည်းမရှိ။
“ငါချက်ချင်းပဲ ဟေးဒီးစ်လက်ထဲကနေ ပိုထရီဂိုရီမြို့ကိုပြန်ယူခဲ့ပြီသိလား”
ဇုစ်အသံကလည်း မနေ့ကဟေးဒီးစ်လိုပင် ရွှင်ပျနေသည်။
အမှန်အတိုင်းပြောရလျှင် ဝမ်းနည်းပါသည်။ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာများဆုံးရှုံး၍မဟုတ်။ အခွန်အတုပ် ကောက်မရတော့မှာစိုး၍မဟုတ်။
ကာကွယ်သူနတ်ဘုရားများကြောင့် ဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေရှာသောမြို့သားများအား ကိုယ်ချင်းစာ မိခြင်းကြောင့်သာ…။
“ဒီအောင်မြင်မှုကို မင်းဂုဏ်မယူဘူးလား လီယိုနိုက်စ်ရဲ့”
အမှန်အတိုင်းဖြေရန် ဘယ်လိုမှမတတ်သာသည်မို့ လီယိုနိုက်စ် ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေသည့် သူ့မျက်နှာကိုပြင်လိုက်ပြီး ဇုစ်၏ဒုတိယအမေးကိုဖြေရန်ပြင်လိုက်စဉ်
အလောသုံးဆယ်နိုင်သည့် ဟေးဒီးစ်၏အသံကိုကြားလိုက်ရပြီး တစ်ဆက်တည်းမှာပင် သူတို့ ရှေ့မှောက် ဟေးဒီးစ်ဘွားခနဲပေါ်လာသည်။
“ဟိုလူယုတ်မာဇုစ်…တို့တွေရဲ့ပိုထရီဂိုရီမြို့ကို ပြန် သိမ်း သွား ”
အကြောင်းက လီယိုနိုက်စ်ဘေးတွင်ရှိနေသော သူ့ညီဇုစ်ကြောင့်…။
“ဇုစ်………လူသားတွေကို မင်း ဘာလာခြိမ်းခြောက်နေတာလဲ”
ဟေးဒီးစ်၏ဒေါသတို့က ဇုစ်ကိုမြင်တော့ ပိုဆိုးသွားပုံပင်…။
သို့သော် ဇုစ်ကလည်း ငြိမ်ခံမနေ…။
“ငါက မင်းရန်က ကာကွယ်ပေးနေတာပါဟေးဒီးစ်ရာ”
“ဘာ………။ ငါ့ရန်က ကာကွယ်တာဟုတ်လား”
ဟေးဒီးစ်မျက်နှာက အကောင်းဆုံးပြက်လုံးတစ်ခု ကြားလိုက်ရသူတစ်ယောက်လို။
“ကောင်းပြီလေ။ ဒါဆိုလည်း ငါတို့တွေ ဒီနေရာမှာ သူသေကိုယ်သေစာရင်းရှင်းကြတာပေါ့”
ရွဲ့သံများ ခနဲ့သံများ တိတ်ဆိတ်သွားသည့် ဒုတိယအကျော့ရန်ပွဲက ပထမတစ်ခေါက်ကထက် ပိုပြင်းထန်မည်ဆိုသည်ကို ဘယ်သူမှမငြင်းပယ်နိုင်။
ဇုစ်လက်ထဲကိုင်စွဲထားသည့် ဝရဇိန်လက်နက်က တဝင်းလက်လက်တောက်ပနေသလို ဟေးဒီးစ် ၏ဒေါသအဟုန်ကြောင့် တုန်ယင်နေသည့်မြေထုကလည်း ကမ္ဘာပျက်လုခမန်း။
နန်းတော်တိုင်လုံးတို့ကလှုပ်ခါယမ်းနေကြပြီး မှူးမတ်များ၊စစ်သည်တော်များမှာလည်း အလဲလဲ အကွဲကွဲ။
အားကုန်မာန်ကုန်အော်ဟစ်လိုက်သံကြောင့် ဇုစ်နှင့်ဟေးဒီးစ်တို့ကြောင်သွားကြပြီး အသံရှင်ဖက် ပြိုင်တူလှည့်ကြည့်မိကြသည်။
“ခင်ဗျားတို့အတ္တတွေကြောင့် ပိုထရီဂိုရီတစ်မြို့လုံးလည်းကြေမွပြီးသွားပြီ။ ဒါနဲ့တောင် ခင်ဗျားတို့ အတွက် မလုံလောက်သေးဘူးလား။”
“ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းတယ်။ ဒီမတိုင်ခင်က ကျုပ်တို့ကမ္ဘာမှာ ကျုပ်တို့သာယာတယ်။
လီယိုနိုက်စ်စကားကြောင့် ဟေးဒီးစ်တို့ယောင်ယမ်းပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ကြည့်မိကြသည်။
“မြင်ကြလား။ ခင်ဗျားတို့မြင်ကြရဲ့လား။ လူတွေရဲ့နာကျင်ဝမ်းနည်းမှုတွေကို။ နောက်ပြီး အဲဒီ လူတွေရဲ့ငိုရှိုက်သံတွေကိုရောကြားရဲ့လား။”
နတ်ဘုရားနှစ်ပါးရောယောင်ပြီး ခေါင်းညှိတ်မိသည်။ သူတို့မျက်လုံးအစုံတွင်လည်း မျက်ရည်တို့ ဝေ့သီလျက်…။
“ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဗျာ စစ်ကိုမုန်းလို့စစ်တိုက်နေရတယ်မပြောပါနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ မြားတစ်ချက် အပစ်တိုင်း ဓားတစ်ချက်အဝင့်တိုင်း စတေးခဲ့ရတာ ကျုပ်တို့အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေပါ။”
ဒေါသတကြီးဟိန်းဟောက်နေခဲ့သည့်လီယိုနိုက်စ် နတ်ဘုရား၂ပါးရှေ့ ရုတ်တရက်ဒူးထောက်ချ လိုက်ကာ ရှိုက်ကြီးတငင်ဆိုသည်။
မှူးမတ်တို့ကတော့ ဝမ်းနည်းမှုကြောင့်မျက်ရည်မကျသော်လည်း အံတွေကိုတင်းတင်းကြိတ်လျက်။
ထိုအဖြစ်ကိုတွေ့တော့ ဇုစ်နှင့်ဟေးဒီးစ်တို့ နောက်တစ်ကြိမ် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ထပ်ကြည့်မိကြသည်။
ထို့နောက် နတ်ဘုရား၂ပါး တိုင်ပင်မထားပါပဲ လီယိုနိုက်စ်ရှေ့မှောက် ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီး ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………။
ထိုအချိန်မှစ၍ နတ်ဘုရားယုံကြည်သည့်လူသားအားလုံး နတ်ဘုရားများကို ပူဇော်ခဲ့ကြသည်၊ ပသခဲ့ကြသည်၊ အလေးအမြတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
သူတို့ကို ……… လျစ်လျူရှုထားကြစေရန်သာ။
အဆောငျဆောငျအခနျးခနျးဖွငျ့ ကယျြပွောလှသော စကျခနျးဆောငျထဲသို့ သူ့သစ်စာတျောခံ မှူးမတျတဈဦး သုတျသီးသုတျပွာဖွငျ့ရောကျလာသညျ။
အစဥျသဖွငျ့တညျငွိမျနတေတျသညျ့မှူးမတျက ခုမကျြပွူးဆနျပွာဖွဈနသေညျမို့ ဘုရငျလီယိုနိုကျဈ မကျြမှောငျကွုတျလိုကျပွီး မနကျစာစားရငျးက အမိနျ့ပေးလိုကျသညျ။
“မောငျမငျး ဘယျလိုဖွဈတုနျးကှဲ့။ အကြိုးအကွောငျးတငျစမျး”
မငျးလမျးတဈလြှောကျ သုတျသုတျပွာပွာလြှောကျလာသညျ့ ဘုရငျလီယိုနိုကျဈ၏ဟနျပနျကွောငျ့ အမှုထမျးအားလုံး မှငျသကျသှားကုနျကွသညျ။ သူတို့ဘုရငျလီယိုနိုကျဈ ဒီလိုရေးကွီးသုတျပွာနိုငျသညျ့ပုံစံကို သူတို့မတှဖေူ့းကွ။
လီယိုနိုကျဈအတှကျကတော့ အခုအခြိနျမှာ ရာဇဣနွေ်ဒဆိုတာတှကေို ဘေးခဏခြိတျထားပွီး ဧညျ့ဆောငျသို့သာအလငျြအမွနျသှားနမေိသညျ။
ဧညျ့ခနျးဆောငျရောကျတော့ တံခါးစောငျ့မြားက သူ့ကိုဦးညှတျအရိုအသပွေုပွီး တံခါးဖှငျ့ပေး လိုကျသညျ။
တံခါးစောငျ့မြားဖှငျ့ပေးလိုကျသညျ့တံခါးမှ ဧညျ့ဆောငျထဲသို့တဈလှမျးခငျြးလှမျးရငျး လီယိုနိုကျဈ တဈယောကျ စိတျလှုပျရှားနမေိ၏။
နောကျဆုံး……… ထောငျ့မှနျစတုဂံပုံကြှနျးစားပှဲကွီး တှငျထိုငျနသေူမြားကိုတှသှေ့ားခြိနျမှာတော့ လီယိုနိုကျဈတဈယောကျ အံ့သွစိတျကွောငျ့ပါးစပျကဆှံ့အသှားသလို တောကျပစူးရှလှသညျ့ အရောငျအဝါ မြားကွောငျ့လညျး မကျြလုံးမြားကိုမှိတျလိုကျသညျ။
ထို့နောကျ မကျြလုံးကိုဖှငျ့ခညျြပိတျခညျြလုပျကာ ဝခှေဲမရသညျ့လသေံဖွငျ့
“ကြုပျတို့က နတျဘုရားတှပေါ။ ကပျြနာမညျကဇုဈ၊ ဟောဒါကကြုပျညီတျော ပိုးဆိုကျဒှနျနဲ့ ကြုပျမိဖုရား ဟီးရာတို့ပါ”
“ခငျဗြားကတော့ လူသားအားလုံးရဲ့ဘုရငျ လီယိုနိုကျဈမှတျတယျ”
“ဟုတျပါတယျအရှငျ ကြှနျတျော့နာမညျက လီယိုနိုကျဈပါ”
လီယိုနိုကျဈပွောရငျးဆိုရငျး ဇုဈရှမှေ့ောကျဒူးထောကျပွီးအရိုအသပေေးလိုကျသညျ။ ဘုရငျကပါ အရိုအသပေေးသညျဆိုတော့ သူ့နောကျတျောပါးရှိ မှူးမတျတှမှောလညျး ပွားပွားဝပျလကျြ။
“အို…အို ထပါ။ ခုလိုမြိုး အရိုအသပေေးစရာမလိုပါဘူး။ သငျ့ကိုတောငျကြုပျတို့ကလေးစားလို့ စကျရာဆောငျဆီတိုကျရိုကျမလာပဲ ဧညျ့ဆောငျကနစေောငျ့နခေဲ့ပွီပဲ။ ခုလိုမြိး အရိုအသမေပေးပါနဲ့”
ဇုဈစကားကွောငျ့ လီယိုနိုကျဈနှငျ့သူ့မှူးမတျမြား အသီးသီးမတျတပျထရပျလိုကျကွပွီး ထိုငျခုံမှာ ဝငျထိုငျလိုကျကွသညျ။
“ဒါဆို အသငျတို့အခုလိုရောကျလာတာ ဘာကွောငျ့ပါလဲ”
“ဒီလိုပါ…။ ကြုပျတို့နတျဘုရားတှကေ ကောငျးကငျဘုံမှာနတေယျ။ အဲ…မွကွေီးထဲမှာတော့ ကပျြတို့နဲ့ညီအဈကိုတျောတဲ့ ဟေးဒီးဈဆိုတာနတေယျ။
သူကအတ်တကွီးတယျ။ နတျဘုရားတှကေိုအုပျစိုးခှငျ့သာမဟုတျဘူး စကျွာဝဠာကွီးရဲ့အုပျစိုးခှငျ့ ကိုပါ သူကလိုခငျြတယျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့ သူ့ကို မွအေောကျပို့ခဲ့ရတာပဲ။
အခု ကြုပျတို့ကိုအန်တရာယျပွုလို့မရတော့ တနျခိုးသိဒ်ဓိအနညျးဆုံးဖွဈတဲ့ သငျတို့လူသားတှကေို အန်တရာယျပွုမယျ့ အရိပျအယောငျတှတှေနေ့ရေတယျ။
ဒီတော့ သငျတို့ကိုကြှနျုပျတို့နတျဘုရားတှကေ အကာအကှယျပေးလိုပါတယျ။
ဇုဈစကားကွောငျ့ လီယိုနိုကျဈနောကျတဈကွိမျထပျအံ့သွမိပွနျသညျ။ အငျအားကွီးမားပါသညျ ဆိုသညျ့ နတျဘုရားတှကေတောငျမှ ကာကှယျပေးပါရစဟေု တောငျးဆိုလာသညျမဟုတျလား။
မညျမှဝြမျးမွောကျမိသညျမသိ လီယိုနိုကျဈတဈယောကျ ခဏတောငျမဆိုငျး
“ဟာ…ဒါဝမျးသာစရာကိစ်စပဲ။ ကြှနျုပျတို့က ဒီကမျးလှမျးခကျြကိုဝမျးမွောကျစှာနဲ့လကျခံပါတယျ”
“ကောငျးပါပွီလီယိုနိုကျဈ ယခုအခြိနျကစပွီး သငျတို့လူသားတှကေို ကြှနျုပျတို့နတျဘုရားတှကေ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပါ့မယျ”
“ဘာ…မငျးတို့က သူ့ရဲ့လကျအောကျကို ခိုဝငျလိုကျတယျပေါ့ဟုတျလား”
ဟေးဒီးဈအသံကဧညျ့ဆောငျတဈခုလုံးသိမျ့သိမျ့တုနျသှားစသေညျ။ လီယိုနိုကျဈနှငျ့သူ့မှူးမတျမြား ကတော့ ခေါငျးမြားကိုတှငျတှငျငုံ့ထားကွဆဲသာ။
ဘုရငျ ကရိုးနပျဈကိုဖွုတျခတြုနျးက ငါရယျ၊ ပိုးဆိုကျဒှနျရယျ၊ ဇုဈရယျ သုံးယောကျသားကတိပွု ခဲ့တယျ။ အာဏာကိုညီတူညီမှခြှဲဝကွေမယျဆိုပွီးတော့ပေ့ါ။
တဈကယျတမျးလညျးတျောလှနျရေးပွီးရော ပိုးဆိုကျဒှနျကရထေုကိုပဲအုပျစိုးရတယျ။ ငါကတော့ စိတျပကျြစရာကောငျးတဲ့လူသတှေနေဲ့ မကောငျးဆိုးဝါးတှကေိုအုပျစိုးရတယျ။ ဒီအခြိနျမှာသူက စကျွာဝဠာရဲ့ အရှငျသခငျအဖွဈခံယူပွီး တဈလောကလုံးကိုအုပျစိုးတယျ။
ဟေးဒီးဈက နာကညျြးခံခကျစှာဖွငျ့ လီယိုနိုကျဈတို့ကို ဆူပူကွိမျးမောငျးနသေညျ။
“ဒါ…ဒါဆို ကြုပျတို့ သူကာကှယျတာလကျမခံတော့ဘူးလို့ ပွနျပွောလိုကျမယျလေ”
ဘုရငျလီယိုနိုကျဈ ဟေးဒီးဈကို မဝံ့မရဲလေးပွောသညျ။
“ရမလားကှ ရမလား။ ခုတဈမြိုး တျောကွာတဈမြိုး လုပျလို့ရမလား”
“ငါက မငျးတို့ကိုစတေနာသနျ့သနျ့နဲ့ပွောတာပါကှာ။ ငါကဒေါသကွီးတာမှနျတယျ။ ဒါပမေယျ့ မငျးတို့ငါ့လိုဖွဈမှာစိုးရိမျတယျ။ ငါ့လိုသစ်စာအဖောကျခံရမှာစိုးရိမျတယျ”
ဒီလိုကတြော့ဟေးဒီးဈကနူးညံ့လှသညျ။ မကျြလုံးအစုံကကွညျလငျသနျ့စငျလကျြ လိမျညာနဟေနျ တှမေရှိ။ ပကတိဖွူစငျစှာ…။
ထို့ကွောငျ့ သူ့အစီအစဥျကို စိတျမသကျမသာနှငျ့ပငျ ထုတျပွောလိုကျသညျ။
“ဘာလုပျရမလဲကှာ။ တိုကျကွရုံပေါ့။ ငါ မငျးတို့အစားတိုကျပေးပါ့မယျ။
ဒါဟာ မငျးတို့ငါ့လိုမြိုး ကလိနျအကခြံရမှာစိုးလို့ပဲ။
တဈနညျး နတျဘုရားတို့ပြျောစံရာ အိုလံပီယံတောငျထိပျ…။
သာယာတငျ့မောလှစှာသော မွငျကှငျးအစုံစုံကိုကွညျ့ရငျး ဇုဈတဈယောကျသကျပွငျးခမြိလိုကျ၏။
စိတျပူပနျစှာမေးလာသညျ့ပိုးဆိုကျဒှနျကို ဇုဈလှညျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ နဂိုကတညျးက အနအေေး သညျ့သူမို့ သူပူပနျနသေညျ့အကွောငျးမြားကို ပိုးဆိုကျဒှနျမရိပျစားမိ။
“တို့တှရေဲ့တျောလှနျရေးပွီးသှားတော့ ငါကစကျွာဝဠာရဲ့အုပျစိုးသူအဖွဈခံယူတယျ။ မငျးကိုတော့ ရထေုကိုအုပျစိုးစဆေိုပွီးသတျမှတျခဲ့တယျ။ ဟေးဒီးဈကိုတော့ မွအေောကျပို့ခဲ့တယျ။
ဒီတော့မှ ဇုဈက အမွျောအမွငျပွညျ့စုံသူတဈဦး၏လသေံဖွငျ့
“ဟေးဒီးဈဟာဒေါသကွီးတယျ။ နောကျပွီး သူဟာတနျခိုးသိပျထကျတယျ။ သူ့စိတျခံစားခကျြ အတိုငျး တနျခိုးစှမျးအားသုံးပွီးလြှောကျလုပျမယျဆို အားလုံးရှုပျကုနျမှာပေါ့။ ဒီတော့ သူ့ကိုအပွဈသားတှပေဲ ရှိတဲ့ မွအေောကျကိုပို့ခဲ့ရတာ။
ငါလညျး ဒီလိုလုပျခဲ့ရတာ စိတျမကောငျးပါဘူးကှာ။ ဒီထကျပိုစိတျမကောငျးတာကတော့ ညီအဈကိုအခငျြးခငျြး ရနျသူတှလေို သူစိမျးပွငျပွငျဖွဈသှားခဲ့ရတာပဲ”
မကျြလုံးမြားတှငျလညျး မကျြရညျတို့ဝသေီ့ရဈဆိုငျးလကျြ အမှနျပငျစိတျထိခိုကျကွကှေဲနဟေနျက အထငျးသား။
ထိုအခိုကျ ဇုဈရှသေို့ အပိုလိုနနေတျသား အပွေးအလှားရောကျလာသညျ။
“အရှငျမငျးကွီး…… ဟေးဒီးဈတဈယောကျ လူသားတှရေဲ့နယျနိမိတျထဲက ပိုထရီဂိုရီမွို့တျောကို တိုကျခိုကျနပေါပွီ”
စိတျလှုပျရှားမှုကွောငျ့ ဘုရငျလီယိုနိုကျဈ မတျတပျထရပျမိသညျ။
ဆကျသား၏ပွောစကားအရ ပိုထရီဂိုရီမွို့တျောတှငျမွငေလငျြတှလှေုပျပွီး လဆေငျနှာမောငျးမြား ရုတျတရကျတိုကျခတျလာသညျဟုသိရသညျ။
လီယိုနိုကျဈ အလှနျအမငျးစိတျထိခိုကျဟနျဖွငျ့ ပလ်လငျပျေါပွနျထိုငျခလြိုကျစဥျ
“အောငျပွီ လီယိုနိုကျဈရေ အောငျပွီ။
ပိုထရီဂိုရီအပါအဝငျ အနီးတဈဝိုကျကမွို့ရှာတှအေကုနျလုံး ဇုဈတို့လကျထဲကနေ ငါပွနျယူခဲ့ပွီ။ မွို့ကိုစောငျ့ကွပျနတေဲ့ သူတို့အစောငျ့အကွပျတှသေအေောငျ ငလငျြနဲ့လဆေငျနှာမောငျးတော့ဝငျခဲ့ရတယျဟေ့”
“မငျးကို ဇုဈရနျကငါကာကှယျပေးတာထိရောကျရဲ့လား လီယိုနိုကျဈ”
ဟေးဒီးဈကတော့ စဈနိုငျသူတဈယောကျ၏မကျြနှာထားမြိုးနှငျ့ ရှငျပစြှာစကားဆိုလသေညျ။
သို့သျော လီယိုနိုကျဈကတော့ ဝမျးမသာနိုငျပါ။ မပြျောရှငျနိုငျပါ။ ထိုအကွောငျးမြားကိုလညျး ဟေးဒီးဈကိုပွနျမပွောနိုငျပါ။
ဟေးဒီးဈကတော့ သူ့အပွုအမူကို အားရကနြေပျနသေညျ့ပုံပငျ။
လူအမြားသကွေပေကျြစီးရသညျကို လီယိုနိုကျဈမကွိုကျပမေယျ့ သူမတားခဲ့ပါ။ သူမတားဝံ့ခဲ့ပါ။
သူစကျတျောချေါနတောတောငျမနိုးသေး။ ဆကျသားတဈယောကျရောကျနပွေနျသညျ။ မနကေ့ အတိုငျး ပိုထရီဂိုရီမွို့ကပငျ။
လီယိုနိုကျဈ ဝတျလဲတျောကိုကပွာကယာလဲလိုကျပွီး ထိုဆကျသားကိုရှတေ့ျောသှငျးလိုကျ၏။
“မောငျမငျး ဘာထူးလို့လဲကှဲ့။ ငါကိုယျတျောကိုတငျလြှောကျစမျး”
ပိုထရီဂိုရီမွို့မှာ ငလငျြတှလှေုပျ၊လဆေငျနှာမောငျးတိုကျပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ မိုးကွိုးတှပေဈပွီး မိုးတှသေညျးသညျးမညျးမညျးထပျရှာလာပါတယျ”
ကွားလိုကျရသညျ့သတငျးကွောငျ့ လီယိုနိုကျဈတဈယောကျ ခွဖြေားလကျဖြားမြားပငျအေးစကျ သှားသညျ။
ဘုရား ဘုရား။ ဖွဈရလေ။
ကပျဆိုးတဈခုနှငျ့ကွုံလိုကျရလို့ နစေရာမဲ့နသေညျ့ သူ့တိုငျးသူပွညျသားတှေ ရထေဲမိုးထဲမှာ ခိုကျခိုကျတုနျနကွေမညျ့ပုံကိုတှေးမိရငျး လီယိုနိုကျဈဝမျးနညျးလာမိသညျ။
အသံပိုငျရှငျကိုသူသိသညျ။ သို့သျော နှုတျမဆကျမိ။ နှုတျဆကျခငျြစိတျလညျးမရှိ။
“ငါခကျြခငျြးပဲ ဟေးဒီးဈလကျထဲကနေ ပိုထရီဂိုရီမွို့ကိုပွနျယူခဲ့ပွီသိလား”
ဇုဈအသံကလညျး မနကေ့ဟေးဒီးဈလိုပငျ ရှငျပနြသေညျ။
အမှနျအတိုငျးပွောရလှငျြ ဝမျးနညျးပါသညျ။ နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာမြားဆုံးရှုံး၍မဟုတျ။ အခှနျအတုပျ ကောကျမရတော့မှာစိုး၍မဟုတျ။
ကာကှယျသူနတျဘုရားမြားကွောငျ့ ဒုက်ခပငျလယျဝနေရှောသောမွို့သားမြားအား ကိုယျခငျြးစာ မိခွငျးကွောငျ့သာ…။
“ဒီအောငျမွငျမှုကို မငျးဂုဏျမယူဘူးလား လီယိုနိုကျဈရဲ့”
အမှနျအတိုငျးဖွရေနျ ဘယျလိုမှမတတျသာသညျမို့ လီယိုနိုကျဈ ကွကှေဲဝမျးနညျးနသေညျ့ သူ့မကျြနှာကိုပွငျလိုကျပွီး ဇုဈ၏ဒုတိယအမေးကိုဖွရေနျပွငျလိုကျစဥျ
အလောသုံးဆယျနိုငျသညျ့ ဟေးဒီးဈ၏အသံကိုကွားလိုကျရပွီး တဈဆကျတညျးမှာပငျ သူတို့ ရှမှေ့ောကျ ဟေးဒီးဈဘှားခနဲပျေါလာသညျ။
“ဟိုလူယုတျမာဇုဈ…တို့တှရေဲ့ပိုထရီဂိုရီမွို့ကို ပွနျ သိမျး သှား ”
အကွောငျးက လီယိုနိုကျဈဘေးတှငျရှိနသေော သူ့ညီဇုဈကွောငျ့…။
“ဇုဈ………လူသားတှကေို မငျး ဘာလာခွိမျးခွောကျနတောလဲ”
ဟေးဒီးဈ၏ဒေါသတို့က ဇုဈကိုမွငျတော့ ပိုဆိုးသှားပုံပငျ…။
သို့သျော ဇုဈကလညျး ငွိမျခံမနေ…။
“ငါက မငျးရနျက ကာကှယျပေးနတောပါဟေးဒီးဈရာ”
“ဘာ………။ ငါ့ရနျက ကာကှယျတာဟုတျလား”
ဟေးဒီးဈမကျြနှာက အကောငျးဆုံးပွကျလုံးတဈခု ကွားလိုကျရသူတဈယောကျလို။
“ကောငျးပွီလေ။ ဒါဆိုလညျး ငါတို့တှေ ဒီနရောမှာ သူသကေိုယျသစောရငျးရှငျးကွတာပေါ့”
ရှဲ့သံမြား ခနဲ့သံမြား တိတျဆိတျသှားသညျ့ ဒုတိယအကြော့ရနျပှဲက ပထမတဈခေါကျကထကျ ပိုပွငျးထနျမညျဆိုသညျကို ဘယျသူမှမငွငျးပယျနိုငျ။
ဇုဈလကျထဲကိုငျစှဲထားသညျ့ ဝရဇိနျလကျနကျက တဝငျးလကျလကျတောကျပနသေလို ဟေးဒီးဈ ၏ဒေါသအဟုနျကွောငျ့ တုနျယငျနသေညျ့မွထေုကလညျး ကမ်ာဘပကျြလုခမနျး။
နနျးတျောတိုငျလုံးတို့ကလှုပျခါယမျးနကွေပွီး မှူးမတျမြား၊စဈသညျတျောမြားမှာလညျး အလဲလဲ အကှဲကှဲ။
အားကုနျမာနျကုနျအျောဟဈလိုကျသံကွောငျ့ ဇုဈနှငျ့ဟေးဒီးဈတို့ကွောငျသှားကွပွီး အသံရှငျဖကျ ပွိုငျတူလှညျ့ကွညျ့မိကွသညျ။
“ခငျဗြားတို့အတ်တတှကွေောငျ့ ပိုထရီဂိုရီတဈမွို့လုံးလညျးကွမှေပွီးသှားပွီ။ ဒါနဲ့တောငျ ခငျဗြားတို့ အတှကျ မလုံလောကျသေးဘူးလား။”
“ခငျဗြားတို့က ကြုပျတို့ကိုကာကှယျပေးဖို့ကမျးလှမျးတယျ။ ဒီမတိုငျခငျက ကြုပျတို့ကမ်ာဘမှာ ကြုပျတို့သာယာတယျ။
လီယိုနိုကျဈစကားကွောငျ့ ဟေးဒီးဈတို့ယောငျယမျးပွီး ဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့ကွညျ့မိကွသညျ။
“မွငျကွလား။ ခငျဗြားတို့မွငျကွရဲ့လား။ လူတှရေဲ့နာကငျြဝမျးနညျးမှုတှကေို။ နောကျပွီး အဲဒီ လူတှရေဲ့ငိုရှိုကျသံတှကေိုရောကွားရဲ့လား။”
နတျဘုရားနှဈပါးရောယောငျပွီး ခေါငျးညှိတျမိသညျ။ သူတို့မကျြလုံးအစုံတှငျလညျး မကျြရညျတို့ ဝသေီ့လကျြ…။
“ကြေးဇူးပွုပွီးတော့ဗြာ စဈကိုမုနျးလို့စဈတိုကျနရေတယျမပွောပါနဲ့။ ခငျဗြားတို့ မွားတဈခကျြ အပဈတိုငျး ဓားတဈခကျြအဝငျ့တိုငျး စတေးခဲ့ရတာ ကြုပျတို့အပွဈမဲ့တဲ့သူတှပေါ။”
ဒေါသတကွီးဟိနျးဟောကျနခေဲ့သညျ့လီယိုနိုကျဈ နတျဘုရား၂ပါးရှေ့ ရုတျတရကျဒူးထောကျခြ လိုကျကာ ရှိုကျကွီးတငငျဆိုသညျ။
မှူးမတျတို့ကတော့ ဝမျးနညျးမှုကွောငျ့မကျြရညျမကသြျောလညျး အံတှကေိုတငျးတငျးကွိတျလကျြ။
ထိုအဖွဈကိုတှတေ့ော့ ဇုဈနှငျ့ဟေးဒီးဈတို့ နောကျတဈကွိမျ တဈယောကျမကျြနှာတဈယောကျ ထပျကွညျ့မိကွသညျ။
ထို့နောကျ နတျဘုရား၂ပါး တိုငျပငျမထားပါပဲ လီယိုနိုကျဈရှမှေ့ောကျ ဒူးထောကျခလြိုကျပွီး ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………။
ထိုအခြိနျမှစ၍ နတျဘုရားယုံကွညျသညျ့လူသားအားလုံး နတျဘုရားမြားကို ပူဇျောခဲ့ကွသညျ၊ ပသခဲ့ကွသညျ၊ အလေးအမွတျပွုခဲ့ကွသညျ။
သူတို့ကို ……… လဈြလြူရှုထားကွစရေနျသာ။
This entry was posted in ဝတ္ထုတို, အတွေးစာစုများ(ရသ) on December 20, 2015 by linyeikhtin.
This entry was posted in ကဗျာ on December 15, 2015 by linyeikhtin.
This entry was posted in ဟာသ, ပြခန်း on December 11, 2015 by linyeikhtin.